MOMBA NY FAMINDRAM-PON’ANDRIAMANITRA
Fototry ny fanantenana amin’ny Fitoriana ny Evanjely amin’ny fomba vaovao
Indro misy lahatsoratra navoakan'ny gazety Lakroan'i Madagasikara laharana 4001, pejy faha-15 mikasika ny famindram-pon'Andriamanitra hatrany.
Indro ampitaina amintsika ny Hafatra famaranana ny Taon-jobilin'ny Famindram-po avy amin'ireo Eveka mpiandraikitra izany.
Hafatry ny Eveka eto Madagasikara
Nivory ara-potoana ny Eveka ao anatin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara. Toa izao ny Hafatra nampitain'izy ireo, ho an'ny kristianina rehetra sy ireo tsara sitra-po eto amin’ity Nosy malalantsika ity, taorian'ny fivoriana izay natao ny 4 hatramin'ny 11 novambra teo.
Finoana manoloana ny fomba amam-panao
Voaantso hiaiky heloka ireo mpilalao ody ratsy sy mpamosavy
Benirina il y a 5 années
Nisy lahatsoratra navoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3993, alahady 9 okitobra 2016, pejy faha-3 miresaka momba ny asan'ny maizina ary nilaza fa mihanaka ny filalaovana ody sy ny famosaviana. Ahoan kosa hoy ny fampianaran'ny Fiangonana manoloana izany? Indro lahatsoratra hita tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3993, alahady 16 okitobra 2016, pejy faha-13.
Manodidina ny Filankevitra faha-8
Marolahy Dominique il y a 5 années
Navitrika ny fandraisana anjaran’ireo mpizaika miisa 160 avy tamin’ireo disitrika 18 sy Paroasy 6 mandrafitra ny Diosezin’i Morondava nandritry ny filankevitra ny 8 ka hatramin’ny 11 septambra teo.
Message du Symposium des Conférences Episcoplales d’Afrique et Madagascar
La 17ème assemblée plénière du Symposium des Conférences Episcoplales d’Afrique et Madagascar s'est tenue au Luanda, Angola, du 17 au 24 Juillet 2016. Mgr Désiré Tsarahazana archevêque de Toamasina et Mgr Benjamin Ramaroson archevêque d'Antsiranana ont représenté l'EKAR à cette Assemblée plénière.